Rahoviana ny olona no misoratra anarana amin'ny tranonkala webinar? | Martech Zone
Ireo olona tsara at ON24, mpamatsy vahaolana Webcasting, Event Virtual ary Webinar, dia nanome fiheverana lehibe momba ireo orinasa manao tranokala webinar. Tianay ireo tranonkala web eto Martech Zone ary miara-miasa amin'ny mpiara-miasa aminay izahay mba hampiroborobo sy hanatanteraka azy ireo.
Ireto misy toro-hevitra 4 hanatsarana ny tranonkalanao
Mangataka andro ny mpanatrika Webcast. 64% no misoratra anarana amin'ny herinandro misy webinar mivantana. Ary ireo mpamokatra webcast dia tokony hanao fipoahana fampiroboroboana "andro misy hetsika" foana mba hahazoana mpirehitra farany, satria 21% no misoratra anarana amin'ny andro webinar.
TGIF! Mandefasa mailaka fampiroboroboana amin'ny talata, satria ny olona dia misoratra anarana amin'ny talata mihoatra ny andro hafa - ary mihoatra ny avo roa heny noho ny zoma.
Eritrereto ny morontsiraka roa. Most ON24 ny webinar dia manomboka amin'ny 11 ora amin'ny Pasifika, rehefa mety amin'ny morontsiraka roa, ka mampitombo ny fisoratana anarana sy ny mpanatrika.
Amin'ny fotoana rehetra hijerena. Mitombo ny mpijery araka ny fangatahana. Ny angona benchmark ON24 dia mampiseho fa ny salan'isa 25% amin'ireo izay nisoratra anarana ho webinar talohan'ny daty mivantana dia nijery ny kinova voatahiry ho an'ny hetsika.
Rahoviana ny olona no misoratra anarana amin'ny Webinar anao?
Ireto misy statistika haingana amin'ny Webinar Registrations… tsindrio eto raha hampidina ny tatitra momba ny benchmark Webinar iray manontolo.
Tags: Sary torohayMarketing Webinarfisoratana anaranafisoratana anarana webinar
Fanaparitahana ny varotra sosialy